Trazodone - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Trazodone
Generic Name: Trazodone Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Trazodone ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Trazodoneကိုစိတ်ကျရောဂါအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုကြ၏။ စိတ်အခြေအနေ၊ စားသောက်ချင်စိတ်နှင့် စွမ်းအင်လယ်ဗယ်တို့ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အပြင် စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ညအိပ်မပျော်ခြင်းစသည့် စိတ်ကျရောဂါနှင့် ဆက်စပ်လက္ခဏာများကိုသက်သာစေပါသည်။ Trazodoneသည် ဦးနှောက်အတွင်းရှိတစ်ချို့သောဓါတ်ပစ္စည်းများ ပြန်ညီမျှအောင် လုပ်ပေးနိုင်သောအာနိသင်ရှိပါသည်။
ဆေးကို ဆရာဝန်ညွှန်သည့်အတိုင်းသို့မဟုတ် အစား၊ မုန့်စားပြီးနောက် သောက်ရသည်။ များသေားအားဖြင့် တစ်ရက်လျှင် တစ်ကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ်သောက်ရ၏။ အိပ်ငိုက်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပြီးဆေးကိုတစ်ကြိမ်သာသောက်ရသည်ဆိုပါကညအချိန်တွင်သာသောက်ပါ။ ၂ ကြိမ်သောက်ရပါကတစ်ကြိမ်လောက်ကို ညအိပ်ယာဝင်ချိန်သောက်ရုံနှင့်အကူအညီဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်းသေချာလိုက်နာပါ။
ဆေးပမာဏမှာသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ကုသမှုအားတုံ့ပြန်မှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့ချရန် ဆရာဝန်က ဆေးကိုနည်းနည်းချင်းစပေးပြီးမှ တဖြည်းဖြည်းတိုးပေးပါလိမ့်မည်။
ဆေးကိုညွှန်ထားသည့်အတိုင်းအတိအကျသောက်ပါ။ ညွှန်ကြားထားသည့်ပမာဏထက် ပိုသောက်ခြင်း၊ လျော့သောက်ခြင်း၊ အကြိမ်ရေတိုးခြင်းများမလုပ်ရပါ။ ထိုသို့သောက်ရုံဖြင့် ပိုမြန်မြန်မပျောက်သလိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
နေကောင်းလာသည့်တိုင်ဆေးကိုရက်အပြည့်သောက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဆေးသောက်ဖို့မှတ်မိနေစေရန် နေ့စဉ်တူညီသောအချိန်တွင်သာသောက်ပါ။ ဆရာဝန်နှင့်မတိုင်ပင်ပါဘဲဆေးမရပ်ရပါ။ ဆေးကိုရုတ်တရတ်ရပ်လိုက်ပါကစိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ အိပ်မရခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဆေးအာနိသင်အပြည့်အဝရရန် ၂-၄ ပတ်အထိ ကြာနိုင်ပါသည်။ အခြေအနေတိုးတက်မလာလျှင်၊ ပိုဆိုးလာလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပါ။
Trazodoneကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နှင့် စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားခြင်းကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနည်းပင် ဖြစ်သည်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်ခြင်းနှင့် ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုများမဖြစ်စေရန် Trazodoneကိုရေချိုးခန်းတွင်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းမျိုးမပြုလုပ်ပါနှင့်။ Trazodoneဆေးအမျိုးအစားနှင့် ဆေးထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းသောပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ဆေးဘူးအခွံ၌ပါသောသိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှု ညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားမေးမြန်းခြင်းကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရစေရန်အတွက် ဆေးဝါးအကုန်လုံးကို ကလေးများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဝေးရာတွင် ထားပါ။
Trazodoneအားအိမ်သာထဲပစ်ချခြင်း၊ ရေထွက်ပေါက်များမှ ဆေးချခြင်းမျိုးအားမလုပ်သင့်ပါ။ ဆေးဝါးများကို မလိုအပ်တော့သည့်အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသည့် အခါများတွင် စနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီး၏။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျ မည်ကဲ့သို့စွန့်ပစ်ရမည်ဆိုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်၏ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
Trazodone အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Trazodoneတွင်ပါသော active agent များ inactive agent များနှင့် ဓါတ်မတည့်မှုရှိလျှင်။
ပြီးခဲ့သည့် ၁၄ ရက်အတွင်းMAO inhibitorများသုံးထားပါကTrazodoneကိုမသုံးရပါ။ အန္တရာယ်ရှိသောဓါတ်ပြုမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ MAO inhibitors များမှာisocarboxazid, linezolid, phenelzine, rasagiline, selegiline နှင့် tranylcypromineတို့ဖြစ်သည်။ MAOI များကိုဆက်သောက်မည်ဆိုပါကTrazodoneရပ်ပြီးနောက် ၁၄ ရက်ကြာမှသာစရပါမည်။
စိတ်ကျရောဂါဆေးများကိုစသောက်ရပါကတစ်ချို့လူငယ်များတွင် သတ်သေလိုသည့်အတွေးများ ဖြစ်လာတတ်၏။Trazodoneသုံးနေစဉ် ဆေးခန်းမှန်မှန်ပြခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်က သင့်အခြေအနေတိုးတက်မှုကို ကြည့်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင့်မိသားစုနှင့် သင့်အားပြုစုသူများကိုစိတ်အခြေအနေပြောင်းသည့် လက္ခဏာများကိုသိအောင်ပြောထားပေးပါ။
SSRI စိတ်ကျကုဆေးများကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သောက်သုံးပါကကလေးတွင်အဆုတ်ပြဿနာများနှင့် တခြားနောက်ဆက်တွဲများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆေးများကိုရပ်လိုက်ပါကစိတ်ပြန်ကျလာနိုင်ပါသည်။ Trazodoneသောက်နေစဉ် ကိုယ်ဝန်ရှိလာပါက ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းပြောပါ။ ဆရာဝန်အကြံမပြုဘဲ ဆေးကိုရပ်ခြင်းစသောက်ခြင်းများမပြုလုပ်ရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Trazodone ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Trazodone ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
စိတ်အခြေအနေအပြောင်းမြန်ခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း
ခေါင်းမူးခြင်း၊ မူးလဲခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း
စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ ထင်ယောင်မှားမြင်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ Reflex များအက်တစ်ဖြစ်လွန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဟန်ချက်ပျောက်ဆုံးခြင်း
ကြွက်သားများမာတောင့်ခြင်း၊ အဖျားကြီးခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ နှလုံးခုန်မညီခြင်း၊ ခြေလက်တုန်ခြင်း၊ မူးမေ့လဲချင်သလိုခံစားရခြင်း
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်မရခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာဖြစ်ခြင်း၊ မတည်ငြိမ်သလိုခံစားရခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ အသက်ရှုမဝခြင်း၊ အသက်ရှူရပ်ရပ်သွားခြင်း
ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လက်မောင်းနှင့် ပုခုံးများအောင့်ခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ ချွေးစေးပြန်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်လုံးနေမကောင်းသလိုဖြစ်ခြင်း
လိင်အင်္ဂါထောင်မတ်သည့်အခါနာခြင်းသို့မဟုတ် ၆ နာရီအထက်ကြာနေခြင်းတို့ဖြစ်လာပါကtrazodoneကိုရပ်ပြီး ဆရာဝန်နှင့်ချက်ချင်းပြပါ။ ၎င်းသည် အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်ပြီးခွဲစိတ်မှုလိုနိုင်သည်အထိ ပြင်းထန်နိုင်ပါသည်။
ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများဖြစ်သောအင်ပျဉ်ထခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ မျက်နှာ နှုတ်ခမ်း လျှာ လည်ချောင်းတို့ဖောင်းကြွခြင်းတို့ ဖြစ်လာပါကအရေးပေါ်ဆေးကုသမှု ခံယူရပါမည်။
လက္ခဏာအသစ်များဆိုးလာသည်များဥပမာ – စိတ်အခြေအနေ၊ အပြုအမူများပြောင်းခြင်း၊ စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ အိပ်မရခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်လွယ်ခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ ဂဏာမငြိမ်ခြင်း၊ တက်ကြွလွန်ခြင်း၊ စိတ်ပိုကျလာခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေလိုစိတ် နာကျင်လိုစိတ်များ ဖြစ်လာခြင်းတို့ဆိုပါက ဆရာဝန်ကိုပြပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Trazodone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trazodoneသည် သင်အခုသောက်သုံးနေသည့် တခြားသောဆေးဝါးများနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးအာနိသင်ပြောင်းခြင်းနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သောဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်စေရန် သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေသော ဆေးဝါးများအားလုံးကို စာရင်းပြုစုထားပြီး (စာရင်းလုပ်လျှင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားသည်များ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေသည်များ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးပါရပါမည်။) ဆရာဝန် သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအားအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးများကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါပဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းစသည်တို့ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
ပဋိဇီဝဆေးများ – azithromycin, clarithromycin, erythromycin, levofloxacin, moxifloxacin, pentamidine
ကင်ဆာဆေးများ-arsenic trioxide, vandetanib
နှလုံးစည်းချက်ဆေးများ-amiodarone, disopyramide, dofetilide, dronedarone, flecainide, ibutilide, quinidine, sotalol
စိတ်ရောဂါကုဆေးများ – chlorpromazine, haloperidol, pimozide, thioridazine
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Trazodone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Trazodone က အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရက်သေစာနှင့် ဓါတ်ပြုမှုများဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်လာနိုင်သောပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မလိုလားအပ်သည့် ဓါတ်ပြုမှုများမဖြစ်လာစေရန် အစားအသောက်၊ အရက်သေစာများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Trazodone နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Trazodoneသည် လက်ရှိသင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများနှင့် သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုများရှိနိုင်ပါသည်။ သင်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအားပိုဆိုးသွားစေခြင်းသို့မဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်းများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးရန်အရေးကြီးပါသည်။
စိတ်အခြေအနေ၊ အပြုအမူပြောင်းခြင်း (ဥပမာ – စိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း)
ဘိုင်ပိုလာရောဂါ (စိတ်ကြွခြင်းနှင့်ကျခြင်း ဖြစ်နေသောရောဂါ)
နှလုံးစည်းချက်ပြဿနာများ (ဥပမာ – QT prolongation)
Mania သို့မဟုတ် Hypomania
Priapism (လိင်အင်္ဂါထောင်မတ်ချိန်ကြာခြင်း၊ နာခြင်း)
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Trazodone ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကနဦးပမာဏ: တစ်ရက်လျှင် 150 mg ကိုခွဲသောက်ရန်။
ထိန်းညှိပမာဏ: 50 mg ကို ၃-၄ ရက်ကြာတိုင်းတိုးပေးနိုင်သည်။ အများဆုံးပမာဏမှာ ပြင်ပလူနာများအတွက် 400 mg ထက်မပိုရပါ။ 600 mg ကိုအများဆုံးပေးရပြီးမတိုးတော့ပါကဆေးကိုရပ်ရန်သာရှိသည်။
ထိန်းညှိပမာဏ: ပမာဏကို75 mg/dayထိရောက်အောင် သုံးရက်ခြားတိုင်းတစ်ခါတိုးနိုင်ပါသည်။ (ဥပမာ – ၄ ရက်မြောက်နေ့တွင် 225 mg စပေးခြင်း)
အများဆုံးပမာဏ: 375 mg
Trazodoneextended-releaseဆေးပြားများကိုနေ့စဉ်တူညီသောအချိန်တွင်သာသောက်ပါ။ ညအိပ်ယာဝင်ချိန်တွင်ပိုကောင်းသည်။ လုံလောက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုရပြီဆိုပါကဆေးပမာဏကို ဖြည်းဖြည်းချင်းလျော့ရ၏။ နောက်ပိုင်းချိန်ညှိခြင်းသည် လူနာ၏တုံ့ပြန်မှုပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကလေးတွေအတွက် Trazodone ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Trazodoneကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆေးပြား 150 mg; 300 mg
Trazodoneကိုသုံးစွဲဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရသည့်အချိန်တွင် အမြန်ဆုံးသုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သုံးရမည့်အချိန်နှင့် နီးကပ်နေပြီဆိုပါကလွတ်သွားသောအကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်၌ပင်သုံးလိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏအား နှစ်ဆတိုးတာမျိုးမလုပ်ပါနှင့်။
Trazodone. https://www.drugs.com/trazodone.html. Accessed July 26, 2017
Trazodone. http://www.webmd.com/drugs/2/drug-11188-89/trazodone-oral/trazodone-oral/details. Accessed July 26, 2017